Nwere ike Xians Nwere Fun? — njem Lee - Official Site
Nwere ike Xians Nwere Fun?
Ọ na-aghọ a Christian ịpụta ọgwụgwụ nke m fun? Nke ahụ bụ ihe na-akpali ajụjụ na m na-eche a mma ka mmadụ jụọ. E nwere ihe ụfọdụ foto nke Christianity na nke ahụ na-ese. Mgbe ndị mmadụ na-eche nke Christianity ha na-eche dị iche iche ihe. Ụfọdụ na-eche na iti mkpu TV na-ekwusa, ndị ọzọ na-eche na-acha ọcha Ihọd na a uwe ma ọ bụ agadi nwa nne nne na nnukwu ụka okpu. Ụfọdụ na-eche na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agbasochi omenala ma ọ bụ ndị ndị na-adịghị amasị sayensị. Ma nnọọ ole na ole ndị na-eche Christianity na-eche: hey, nke ahụ ga-a fun ihe na-eme! Aghọ a Christian adịghị ka fun na ndị mmadụ.
Christianity enwetatụbeghị a aha dị ka a killjoy. Ọ bụ ihe maka agwụ ike ndị na ochie ndị mmadụ. One rapper na a song na-ekwu,, "Ọ bụrụ na ị egwu, mgbe ahụ na-aga chọọchị. "O doro anya na Christian chọọchị dị iche iche bụ maka ihere, Ujo punks. Ndị na-eche na-aghọ a Christian pụtara na ị ga-eyi suut na ogologo Uwe, na-ege ntị ọjọọ Christian music, na ịna-eme jụụ. Na mbụ, ụfọdụ n'ime y'all na-adịghị ajụkwa ke akpa itie, ma nke ahụ bụ ihe ọzọ akụkọ.
M nnọọ na-ele nke a Jeazanaya Ọma ahụ ajụjụ ọnụ ụnyaahụ. Ọ na-ekwu banyere ahụmahụ o na chọọchị dị iche iche. Na ahụmahụ ya ụka mgbe nile, sị abịa dị ka ị na-, ma ọ dịghị mgbe ya esigh im n'obi. Ọ dịtụghị mgbe ọ welcome. Na mgbe ndị mmadụ jụrụ ya ma ọ naara Kraịst n'ime ndụ ya, Ọ si ọ dịghị njikere. O chere nke ahụ pụtara na o nwere ime ka gospel ndia now. The foto na e nyere of Christianity bụ otu ebe ị na-agbanwe ihe niile banyere onwe gị; ị nwere ike ịkwụsị ụtọ ihe niile ị na a na-anụ ụtọ. Dị ka ma ọ bụrụ na-aghọ a Christian bụ ihe ikpeazụ ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị chọrọ onwe gị obi ụtọ!
Gịnị bụ Fun?
Nke a bụ otú fun a si kọwaa akwụkwọ ọkọwa okwu. fun bụ: A isi iyi nke ọṅụ, ntụrụndụ, ma ọ bụ obi ụtọ. E nweghị ajụjụ na ịbụ onye Kraịst pụtara nghọta gị na ahụmahụ nke ụtọ, ntụrụndụ, na ihe ụtọ ga-agbanwe. Ọ bụrụ na ị na-eche ma ọ bụrụ na o nwere ike ịnọ n'otu, ya nwere ike ọ bụghị. O doro anya na ịbụ onye Kraịst na-agbanwe ụzọ unu na-ahụ ndụ.
Ajụjụ bụ: ka ọ na-enyere ma ọ bụ imerụ gị fun? Bụ Christianity onye iro gị ụtọ, ntụrụndụ, na ihe ụtọ? Ma ọ bụ otú ọ na-enyere gị aka na-enwe ọṅụ, ntụrụndụ, na obi ụtọ na ha ezi uche? Ka ndị niile nọ omenala nwetara ya? Bụ Christianity na fun na-abụghị nsọtụ nke ụdịdị dị iche iche?
Echere m na otu n'ime ihe ndị mere ndị mmadụ okwu banyere Christianity otú a bụ n'ihi otú Ndị Kraịst na-ẹwụtde ke media. Ọ bụla Christian Ihọd na a fim ma ọ bụ TV show bụ ndị kasị njọ. Ha na-na-emekarị ekpe ndị ọzọ ikpe na corny. Ndị mmadụ n'ụzọ obi caricature ọtụtụ Ndị Kraịst na-elebara ihe ndị kasị mkpari stof.
Nke abụọ bụ n'ihi na ụfọdụ Ndị Kraịst na ndị na-akpọ onwe ha Ndị Kraịst na-enye na vibe. Ha na-eme ka echiche. Ụfọdụ Ndị Kraịst n'ezie adịghị enwe ihe ọ bụla ha na-ata ụta ya na Chineke, dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụ ya mmejọ ya.
Olee ihe m na-eche? M abụọ azịza nke ajụjụ maka n'abalị. Ọ na-aghọ a Christian ịpụta ọgwụgwụ nke m fun? My mbụ azịza ya bụ: No
m. No - Ịghọ a Christian apụtaghị Ọgwụgwụ nke Your Fun
Ọ bụrụ n'ezie na-eche banyere ya, ọ bụ ihe onye iberibe ajụjụ ịjụ. "Ọ na-aghọ a Christian ịpụta ọgwụgwụ nke ụtọ, ntụrụndụ, na ihe ụtọ ná ndụ m?"Ọ na-ekwu ihe banyere Chineke ịjụ ajụjụ. Ọ bụrụ na onye na-Kraịst pụtara na-esonụ Chineke site n'okwukwe nime Kraist, mgbe ahụ ka rephrase ajụjụ ọ arịọ: Chineke ọ chọrọ ka ị na-enwe ihe un-atọ ụtọ ndụ? Iji zaa ee-ekwu ihe na-abụghị eziokwu banyere Ya. Ọ bụ Onye Okike nke ihe niile dị ndụ. N'ezie ọ chọrọ ka i kporie ndụ na O kere.
Ọ bụ dị ka-arịọ ma ọ bụrụ na Jay-Z ma ọ bụ Kendrick Lamar chọrọ ka ị kpọrọ asị ya Kacha ọhụrụ album. Ndi enye chọrọ ka ị dị nnọọ na-ata ahụhụ site na ya na ya asị? Ma ọ bụ dị ka Steven Spielberg chọrọ ka ị na-asị ya nkiri, ma ọ bụ na ọ chọrọ ka ị na-doze anya n'ihi na ị kpọrọ asị Lincoln nke ukwuu. Ọma-N'ezie! Ha mere ka o, na akụkụ, nke mere na ndị ọzọ ga-enweta ya.
Ndụ bụ dị iche iche, n'ihi na ọ bụghị ihe dị ụfọdụ ụdị ntụrụndụ, ma e nwere myirịta. Ihe anyị maara si n'Akwụkwọ Nsọ bụ na Chineke bụ ezigbo Chineke. O kere ndụ. O mere ka anyị n'onyinyo Ya na Ọ chọrọ ka anyị na-ebi na ndụ n'ụzọ zuru ezu. Ọ chọrọ ka anyị nụ ụtọ ndụ ma na-eto Ya maka ya.
Ọ dịghị ihe na Bible na-atụ aro na Chineke achọghị ka anyị nụ ụtọ ndụ anyị. Mgbe ị na-agụ Bible nke ahụ bụ nnọọ bụghị foto na ị na-aga na-. Otú ndị mmadụ si ekwu okwu banyere Christianity ị na-eche na e nwere a amaokwu a ka Jizọs na-ekwu,, "Ọ bụrụ na ị na-eso m, ị ga-ad igi, asị na ihe niile, na ịdọrọ ndị ọzọ gị gbadaa. "Ma ị na-agaghị na-ahụ ihe ọ bụla amaokwu dị ka nke ahụ.
Kama ị ga-ahụ Chineke chọrọ ka ọ dịrị anyị ná ndụ anyị. M na-aga na-agụ a di na nwunye nke amaokwu na m na-eche mgbe a si.
Ndị na-eche na Chineke chọrọ ka anyị ghara ezi ihe, ma nke ahụ bụ ụgha. -Ege ntị James 1:16-17.
Ọ bụghị eduhie, ụmụnna mm hụrụ n'anya. Ezi onyinye ọ bụla zuru okè onyinye si n'elu, agbadata site n'aka Nna nke ìhè ridata na onye na-adịghị agbanwe agbanwe, ma ọ bụ onyinyo ruru ka mgbanwe. (James 1:16-17)
Chineke adịghị agbalị ka anyị ghara ezi ihe; Chineke bụ Onye na-enye n'ihe ọma niile. Ọ bụ isi iyi. Nke ahụ bụ ka ụmụaka na n'otu ogige ụmụ mgbei na-arịọ ma ọ bụrụ na ndị na-akwụ ụgwọ maka ha ndo na uwe chọrọ emere ha ihe ọma. Ha kwụrụ ụgwọ ihe niile otú kedu ihe ị chere? Ọ bụ ihe amamihe na-adịghị ajụjụ.
Chineke kere enyi na alụmdi na nwunye. Chineke kere amụmụ ọnụ ọchị ma na-achị ọchị. Ndị a niile bụ onyinye si n'aka Chineke. Ya mere, mee ihe dị ka ọ chọghị ka anyị nụ ụtọ ha bụ ihe nzuzu.
Gịnị banyere Jesus? Ọ na-enwe ihe ọ bụla na-ekwu banyere nke a? na John 10, Jesus gosiri ọdịiche dị n'etiti ya onwe ya na ndị ozizi ụgha. Ndị a ndị ozizi ụgha na-edu ndị akpafu; ha bụ ndị ọjọọ ndị ọzụzụ atụrụ. Jizọs kpọrọ ha ndị ohi.
"Onye ohi na-abịa izu ohi, egbu, ma bibie. M biara ka ha we nwe ndu, na nwere ya n'ụba. " (John 10:10)
Nke a na-aga kpọmkwem megide ihe ndị mmadụ na-ekwu na anyị omenala. Ha na-eche na Chineke chọrọ ka na-ezu ohi. -Ezu ohi anyị ọṅụ, obi ụtọ, na free uche. Na Chineke chọrọ igbu anyị na ịdọrọ anyị ala. Ma Jizọs na-ekwu, Ọ bịara enye bụ ndụ jupụtara ma ọ bụ a zuru ndụ. Ọ chọrọ ka anyị na-ebi ndụ anyị zuru. Anyị Aga okwu banyere mgbe e mesịrị.
na Psalm 16, David na-agwa Chineke na ebe a bụ ihe ọ na-ekwu.
"Ị ime ka m'mara n'ụzọ nke ndụ; na n'ihu gị n'ebe ahụ bụ izu ezu nke ọṅụ; n'aka nri gị bụ ihe ụtọ ruo mgbe ebighị ebi ọzọ. " (Psalm 16:11)
Ya mere, na-abịa nso n'ebe Chineke adịghị eduga agwụ ike mwute, ọ na-arụpụta ọṅụ. Ọ bụghị naanị ọ bụla ọṅụ ma na njuputa nke ọṅụ. Na e nwere ihe ụtọ. Ọ bụghị nkeji ise ma ọ bụ afọ ise nke obi ụtọ, ma ihe ụtọ ruo mgbe ebighi ebi.
M nwere ike ịga n'ihu ruo ụbọchị na amaokwu dị ka nke a. Christianity bụ onye iro nke ụtọ, ntụrụndụ, na ihe ụtọ. Ọ bụ n'ezie n'ụzọ nke ezi ụtọ, ntụrụndụ, na ihe ụtọ.
Izu gara aga, mụ na nwunye m gara ịhụ Gravity na IMAX 3D. Ị mara ha na-enye gị a big clunky iko na-etinye on. Ma, ọ bụrụ kama ndị iko anyị na-ada anyị na-ehi ụra masks n'ụlọ? Ị mara ihe ndị ahụ ị na-etinye on ka iko na-egbochi ihe niile e ìhè? Ị na-ahụghị ihe ọ bụla ma ọchịchịrị.
Ugbu a ihe ga-mere ọ bụrụ kama 3D iko anyị na-etinye na-ehi ụra masks? Anyị na-atụ uche dum nkiri. Ma ebe ọ bụ na anyị na-etinye on ndị 3D iko ihe ịtụnanya. Ọ dị ka anyị nọ nkiri. M na-jide m ọṅụṅụ n'ihi ya, ọ na-ise n'elu nọ n'ikuku. Stuff bụ anyị gburugburu. Stuff na-abịa na anyị. The iko me ka ahụmahụ ndụ.
Anyị na-emeso Chineke dị ka ọ na-agbalị iji nyefee anyị n'aka na-ehi ụra nkpuchi na fim, mgbe n'ezie na ọ na-agbalị iji nyefee anyị n'aka ndị 3D enyoanya. Ọ na-agbalị igbochi anyị ọṅụ, na-ahapụ anyị n'ọchịchịrị. Ọ chọrọ ka anyị ọṅụ ka a enwekwukwa na-ezu. Ọ chọrọ ka anyị nụ ụtọ ndụ dị ka e zubere ka ọ na-enwe. Ọ dị mwute na anyị adịghị mgbe niile maara ihe na-anya dị ka.
Anyị nsogbu bụ na anyị n'okpuru echiche na fun pụtara eme ihe niile anyị na-eche dị na ọ bụla. Ma ọ bụrụ na anyị n'ezie na-eche banyere ya, anyị niile mara na nke ahụ bụ a ọjọọ echiche. Ònye chọrọ ịbụ ohu na ihe niile ha na-eche dị eme? Anyị na-fickle.
Nwa m chọrọ ka fun na ọ na-eche n'ịnọgide mkpịsị aka ya tinyekwa bụ ụzọ kasị mma ime na. Ọ chọrọ nduzi n'ebe m. Na ọ bụrụ na nwa m na-aga nwere fun kama ịnwụ o nwere ike ịtụkwasị m. Ọ na-eche na-eje ije na akwa mgbago ọdịdị fun. Ma, dị ka onye okenye, Ama m na ọ dịghị eje ije ọma na ọ ga daharia ala.
Chineke bụ Onye Okike nke ndụ na Ọ maara. Anyị niile ga-ekweta na anyị na-maara ihe nile. E nwere ihe anyị na-aghọtaghị. Na n'ihi na anyị na mmehie, anyị akpọrọ ihe ọjọọ. Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke na uma ya.
Ụfọdụ ndị na-eche, "Na na ada ụda dị mma ma, Chineke nwere ndị niile nyere n'iwu na-agwa anyị ghara ime fun ihe." Ị na-na na-nri; e nwere iwu nke na-amachibido anyị ihe ụfọdụ. Ma, ọ bụ ka anyị fun a ga-emebi?
Na-eme ka m na-m nke abụọ azịza nke ajụjụ a. Ọ na-aghọ a Christian ịpụta ọgwụgwụ nke m fun? My abụọ azịza ya bụ: Mgbe ụfọdụ,.
II. Mgbe ụfọdụ, – -Esonụ Jesus ga-apụta End of Ụfọdụ n'ime anyị Fun
Achọghị m ka m na-aghọgbu gị. Aghọ a Christian pụtara, ị ga-agọnahụ onwe gị. E nwere ihe ndị ị na-enwe ndị na-ezighị gị, ihe n'ikpeazụ ezu ohi ọṅụ kama inye ya.
Mmanya ókè yiri fun ma na-eduga ná nzuzu mkpebi. Mmekọahụ tupu alụmdi na nwunye yiri fun, ma na miri larịị nke mmekọrịta chiri anya na ọ dịghị mgbe pụtara na a ga-enwe iche site na nkekọ na-adịgide adịgide n'okpuru Chineke. Ọ bụ n'ala ala ụzọ ị pụrụ inye onwe gị pụọ onye ọzọ. Mgbe ụfọdụ dina yiri ka ọ na-eduga ná fun ma ọ na-ebibi anyị na ndị ọzọ.
Dị ka anyị na-ama enyịme, Chineke kere ihe niile nke ndụ na Ọ maara otú o kwesịrị na-enwe. O nyere n'iwu bụ maka ọdịmma anyị. N'aka nri ya bụ ihe ụtọ ruo mgbe ebighi ebi. Na mgbe anyị na-enupụrụ ya isi, anyị na-agagharị n'ebe ezi ọṅụ. Chineke adịghị na-anyị si ezi ndụ; anyị edebe onwe anyị pụọ n'ezi ndụ bụrụ na anyị enupụrụ Ya.
Na dị ka a ima ima edinam Jesus-akpọ anyị ka anyị ịnapụ onwe anyị.
Ọ si niile, "Ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-abịa mgbe m, ya ju onwe-ya, buli kwa obe-ya kwa ụbọchị, na-eso m. " (Luke 9:23)
Gịnị ka ọ pụtara agọnahụ onwe gị? Ịgọnahụ onwe gị pụtara ịjụ onwe gị. Ịjụ onwe gị. -Ajụ ihe ị gachosi ik ​​ime.
A dịghị ada mara mma na N'ụbọchị nke abụọ. Eleghị anya ị na-agaghị anabata na on a ji mara na kaadị. Nke a abụghị nnọọ na-agba ume na-eso ụzọ. Bụ Jesus nnọọ ịbụ ịchịkwa na pụtara na mkparị?
Ọ bụrụ na anyị zuru okè, arịọ anyị ka anyị ịnapụ onwe anyị ga-abụ ihe nzuzu. Ọ bụrụ na anyị mgbe niile mma na ndị maara ihe na-arịọ anyị ka anyị ịnapụ onwe anyị ga-iju. Ma ọ bụrụ na anyị na-ezughị okè na-arịọ anyị ka anyị ịnapụ onwe anyị na-ahụ n'anya. Ọ bụrụ na anyị na-eduhie na messed elu, arịọ anyị ka anyị ịnapụ onwe anyị ihe na-enye aka.
Ị nwere ike ọ gaghị abụcha onwe gị. E nwere ihe ndị ị na-enwe ndị na-ezighị gị. Otú ọtụtụ ugboro nwere i mee mkpebi ndị yiri fun, ma ị nwere obibi ndị na-esi e mesịrị?
Jizọs na-ekwu ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-eso m, ị ga-akwụsị na-esonụ onwe gị. Ọ bụ dị ka-arịọ onye maka ntụziaka. Ọ bụrụ na ị na-aghọta na ị na a ịkpafu, na ị na-ajụ onye na-enyere gị aka, i nwere ike na-aga gị ụzọ. Iso Jisọs n'otu uzo kwere na ị na-efu na na mkpa nke mmadụ iduzi gị. Ya mere, Jizọs na-ekwu, hapụ. Nye m sterịn wheel. I nyela gị nye m. Na na na na Master. Na na na na Onye Ndú. Nke a bụ ihe ọ pụtara iso m.
Ọ bụrụ na nwunye m kwuru, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ di m na ị ga-agọnahụ onwe gị na-eso m. M ga-adị ka good? Ọ bụrụ na nwa m kwuru na… M n'ezie-anya ebe ọ bụ na ọ pụghị ikwu okwu. Ọ bụrụ na ndị president nke United States kwuru na, M ga-ajụ ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na m pastọ kwuru, agọ onwe gị na-eme ihe ọ bụla m na-ekwu n'agbanyeghị ihe ọ bụ, M ga-aga ọzọ ụka. Gịnị mere? N'ihi na m na-achọghị ka-enye ndị reins nke ndụ m kpam kpam n'elu ọzọ mmehie mmadụ. Nke ahụ bụ ihe nzuzu. Ọ dịghị aka m. Ha nwere ike adịghị eduga ná ndụ m n'ụzọ zuru okè ma. Ha nwere onwe ha nsogbu.
Ma Jesus Christ ọzọ adịghị eme mmehie mmadụ. Ọ bụ nsọ, Ọ bụ Onye kere m, na Ọ nwụrụ n'ihi ya, mmehie nwere ike Chineke dịghachi ná mma. Ọ bụ pụrụ ịtụkwasị obi. Ọ maara ihe ná ndụ m kwesịrị ka. Ọ na-aka ike, Ọ na-ahụ n'anya m. Onye na-Kraịst pụtara na ị debanyere na-adịghị onwe gị mgbe ụfọdụ.
Ọ bụrụ na ị na-agaghị ekwu enweghị ka onwe gị mgbe nile, i kwesịrị ịjụ onwe gị ma ị na-eso Jizọs n'ezie. N'ihi na anyị na-ezighị ezi mgbe nile na anyị mkpa enyemaka Ya.
Solomon Ihe Nlereanya
Otu n'ime ndị realest akwụkwọ in the Scriptures bụ akwụkwọ Eklisiastis. Ọ bụ eleghị anya e dere site Solomon. n'ime ya, o kwuru okwu banyere otú ihe niile bụ ihe efu. Ebe ọ bụ na o nwere ọtụtụ ihe niile, ọ na-ekwu site n'ahụmahụ. Ebe a bụ ihe o kwuru.
"Onye hụrụ ego agaghi-eju ya afọ ego." (Ecclesiastes 5:10)
N'ihi ya, i nwere ike na-a, dị ka ebe a anyị na-aga. Ha kpọrọ asị na ihe niile, gụnyere ego. Chineke achọghị ka m na-enweta ya. Ma ọ bụ i nwere ike ịhụ ya dị ka Chineke na-echebe gị ka ị ghara ịchụ ihe a na-agaghị afọ ju gị
Gee ntị n'ihe ọ na-ekwu mgbe e mesịrị:
Onye ọ bụla na-ahu Chineke nyere akụ na ụba na ihe onwunwe na ike na-enweta ha, na-anabata ya ọtụtụ na-aṅụrị ọṅụ na ya adọgbu onwe ha n'ọrụ-nke a bụ onyinye Chineke. N'ihi na ọ gaghi ukwuu cheta ụbọchị nile nke ndụ ya n'ihi na Chineke na-eme ya ji na ọṅụ n'obi ya. (Ecclesiastes 5:19-20)
Bụ na a atuaha? -enwe ego? M chere na ọ sịrị na ọ ga-eme ka afọ ju gị. Chineke na-enye ọṅụ, ọ bụghị ego. Ego na-adịghị egbo ị, ọ dị na-eme ka ị chọrọ ego. Ọ bụ ogbi na-ebi ndụ n'ihi na ọ na-. Ị pụrụ ịnụ ụtọ ihe, enweghị bi n'okpuru ụgha ọtụtụ ndị chere na ọ ga-egbo mkpụrụ obi gị. Chineke na-agbalị ichebe anyị.
Anyị nsogbu bụ na anyị chọrọ ife onyinye kama Onye na-enye, Creation kama Onye Okike. Anyị chọrọ na-efe kwaaji kama nke na-ese, peeji kama na-ede akwụkwọ. Anyị chọrọ na-achụso ego kama nke Onye ahụ na-enye ihe niile. Na Jizọs kpọrọ anyị ka anyị ghara na-eso Ya.
Ndị Kraịst adịghị erekwa fun n'ihi na ahuokika, ma ọ bụ ọṅụ n'ihi iru uju. Ha na-erekwa nwa oge ọṅụ, n'ihi ebighị ọṅụ. Ha na-erekwa na-egbu egbu ọṅụ, n'ihi na ndụ na-enye ọṅụ. Ha na-erekwa apụ n'anya ngwa ngwa, fickle ọṅụ, n'ihi na anụ, mkpatụ siri ike ọṅụ.
III. Olee Otú Anyị Enwe Ihe ziri ezi na?
Anyị na-okwukwe na Onye kere anyị.
Anyị All bi ndụ site n'okwukwe
Ma anyị na-aghọta ya ma ọ bụ, anyị niile bụ ndị ndị nke okwukwe. Kpukpru mmadụ. Kraịst, Alakụba, Ndị Hindu na-, Buddha, Agnostics, -Ekweghị na Chineke-anyị nile bi site n'okwukwe, anyị na-ebi ìhè nke ihe anyị kweere na ọ bụla. Ndị gị onye na-eme egwuregwu na-eme n'ezie ike. Gịnị mere? N'ihi na i kweere na ọ ga-eme ka ị ka mma na gị egwuregwu. Ma ọ bụ otú banyere nke a? Ụfọdụ n'ime unu na-etinye adreesị Google Maps iji nweta ebe. Gịnị mere? N'ihi na i kweere na ekwentị gị ga-enye gị ikike ntụziaka. Ọ bụrụ na ị kweere na ekwentị gị ga-duhie gị, nke m na-eche m na-eme mgbe ụfọdụ, unu agaraghị eji ya. M nwere ike ịga na na na. Ma anyị niile bi ndụ site n'okwukwe.
M na-eche ihe ọma na ndụ dị ndụ site n'okwukwe na ezi Chineke. Ọ gwara anyị otú na-enwe Ya e kere eke n'ụzọ ziri ezi. Ọ na-edu anyị ka anyị ọṅụ.
Oge o bula anyi na-emeso ihe ọ bụla ọzọ karịa Chineke dị ka njedebe n'onwe ya anyị na-adịghị anụ ụtọ ya n'ụzọ ziri ezi.
Fun bụ ezughị
Ma eleghị anya ị na-eche, Achọghị m ka m na. Achọrọ m nwere fun. a na-amused, kporie ndụ bụghị ihe niile ndụ na-banyere. Ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụ, na na ihe egwu. Ọ bụrụ na ị na-ewu ndụ gị na ntọala nke fun, ya Aga-abịa tumbling ala mgbe ndụ bụ ike. fun, a na-amused, kporie ndụ ugbu a agaghị ezuru. Gịnị mere na-aga mgbe ebighi ọṅụ?
Na ọ bụ adịghị ezu na-eche ruo mgbe e mesịrị. Gịnị mere echere iji malite ndụ? Kwụsị ịchụ adịgboroja ihe na-amalite ịchụ ata ihe.
Ọ bụ dị ka n'ileghara NBA, n'ihi na ị ga-kama na-egwu NBA 2K on PlayStation. Kwụsị ịchụ adịgboroja ihe, ma nakwere ata ihe na dị. C.S. Lewis kwuru ihe yiri sentimenti mgbe o kwuru nke a:
“Anyị bụ ndị ọkara hearted kere eke aghọgbu banyere na ọṅụṅụ na mmekọahụ na oké ọchịchọ mgbe enweghi ngwụcha ọṅụ na-awa anyị, dị ka ihe na-amaghị atụmatụ na nwa onye chọrọ ịga na-eme apịtị achịcha na a slom n'ihi na ọ ike were ihe pụtara na-enye nke a ezumike na oké osimiri. Anyị bụ ndị dị nnọọ mfe ụtọ” - C.S. Lewis, The Arọ Otuto
M na-eche ndụ bụ ihe niile ndị a adịghị adịgide adịgide ụtọ. Mgbe ahụ, m ghọrọ a Christian. E nwere ihe m na-agụ n'oge on ka a Christian na bibie m ochie foto nke ezi ndụ. A bụ otu ihe atụ.
-Eme ịnwụ ọnwụ Ga
Anyị niile nụrụ ndị na-ekwu banyere ọnwụ site n'oge ruo n'oge. Anyị na na na nụrụ ndị na-ekwu, "Ọ dịghị ihe dị ndụ bụ n'aka ma ọnwụ na ụtụ isi."One ewu ewu rapper kwuru, "Ana m agbalị ka iti ndụ kpatara m ike ịghọ aghụghọ n'ule ọnwụ." Ndị mmadụ na-aghọta na ọnwụ apụghị izere. Ma, dị ka a na-eto eto Christian, M na-agụ a amaokwu banyere ọnwụ na Bible nke di ka ihe-efu m mgbe nụrụ tupu. Pọl onyeozi kwuru banyere ọnwụ na a iju ụzọ. Paul kwuru abụghị nanị ọnwụ bụ ụfọdụ, O we nara ya a nzọ ụkwụ n'ihu. ọ si, "Na-anwụ anwụ bụ uru." Kedu!?
Ọnwụ bụ mgbe ụbụrụ gị, obi gị, na gị n'akpa ume ịkwụsị ọrụ ha. Ọnwụ pụtara ọgwụgwụ nke ndụ ihe jikọrọ ya na ndị òtù ezinụlọ. Ọnwụ bụ ndụ unu ọrụ dị n'ofe. N'adịghị ka anyị ọnwụnwa ndị ọzọ, ọnwụ bụ, n'ihi na onye na-anwụ anwụ, n'ụzọ nkịtị "ndị ọgwụgwụ ụwa"– na ọgwụgwụ nke otu na agbanyeghị. Olee otú ọnwụ ndidi uru? M ike ime ka ego mgbe m nwụrụ? M ike dịkwuo m ọnọdụ mgbe m nwụrụ. O kweghị ha dabara na m ochie echiche nke ọma ndụ.
Ọma ka m ịghọta ihe Pọl bu n'uche anọ okwu-anwụ anwụ bụ uru-na m na-aghọta ihe anọ ahu nke ruru nri n'ihu ha. na Filipaị 1 Paul na-akọwa ihe mere o yiri ka ok na-ma-anọ ndụ ma ọ bụ na-anwụ anwụ n'aka ndị na-akpagbu. Ọ na-ede na amaokwu 21, "Iji dị ndụ BỤ Christ. "Ka okwu ndị, onyeozi gwara m otú ndụ n'ezie ihe nile banyere- ọ bụghị ego, ọ bụghị m n'ọrụ, ọbụna ezinụlọ- ma Jesus. Olee otú m nanị ọdịmma onwe, ọnọdụ-ekwe worldview adị ndụ ọzọ ka na eziokwu?
Life enweghị pụtara n'abụghị Christ, n'ihi na Kraịst bụ ihe ọ bụ ihe niile banyere. Ya mere na-enweta ihe n'ụzọ ziri ezi, anyị na-enwe ha n'ụzọ na-agba akaebe na nke ezi-okwu.
Ihe niile dị mma mgbe ụtọ na ihe ndị ọzọ e zubere ka ọ bụrụ. Mgbe anyị na-emeso ihe ọ bụla dị njedebe onwe ya ọ bụ ihe ọjọọ. Anyị kwesịrị ha dị ka ụzọ isi na njedebe nke Chineke otuto.
Ànyị ga-enwe mmekọahụ na ọtụtụ ndị inyom dị ka o kwere? Ma ọ bụ ọbụna dị nnọọ na onye ọ bụla na ị dị ka ịdị ná mma? Mmekọahụ bụ ihe kasị mma ụtọ na a alụmdi na nwunye ọgbụgba ndụ. Mmadụ abụọ mbọ ka ibe ihe ndị ọzọ nke ndụ ha, -agaghị na n'ebe ọ bụla. Ọ dịghị mkpa n'ihi na anọghị ná nchebe, abụghị ihe ihere. Enyi na enyi bu kasị mma ụtọ na a na-ekwu. E nwere ihe ịdị umeala n'obi, mgbaghara, amara, n'anya.
Ego na-kacha mma ụtọ mgbe ọ na-adịghị efe. Ike a kasị enwe mmasị mgbe ọ na-adịghị efe. Gịnị mere mgbe ọ na-aga efep? Wine n'ókè kwesịrị ekwesị dị mma karịa mmanya ókè. Na f N'ezie ị pụrụ ịnụ ụtọ egwu n'ihe. Ma chee echiche otú ha si gbasa ihe bụ nzube nke ndụ nile: Christ. Ihe niile na-kacha mma ụtọ mgbe ọ rubere Christ.
Anyị na-agbajikwa, na Christ wee mee ka anyị kpezie. Mgbe anyị na-efe ego, ma ọ bụ enyi, ma ọ bụ mmekọahụ, ọ bụ ihe iwe Chineke. Na anyị kwesịrị ka e kpee ha ikpe maka ndị nēkpuchi. Ma Chineke zitere Christ. Jizọs enweghị nsogbu na-anụ ụtọ ihe ọjọọ, ma ọ bụ na-ekpori ndụ na ezi ihe a mmehie. Ma, Jizọs weere na ntaramahụhụ maka mmejọ anyị na obe. Ọ si n'ili bilie na-enye anyị ndụ ebighị ebi.
Ọ bụrụ na anyị ga-ahapụ anyị ochie ụzọ n'azụ, na-jidesienụ Christ anyị nwere ike ịgbaghara, na anyị nwere ike tinye na ọṅụ nke anyị Master. Anyị na-adịghị ndụ anyị ezigbo ndụ ugbu a. Ma Ọ ga-enye anyị ọṅụ na obi ụtọ ruo mgbe ebighi ebi.
Victor • October 24, 2013 na 2:17 pm • zaghachi
Triggz • October 24, 2013 na 4:36 pm • zaghachi
Chaị!n'ezie na ị na-arịa nke Chineke brah,na ịtụkwasị m obi unu gwara a ọtụtụ na gị ntụkwasị obi na okwukwe na God.these posts n'ezie agbanweela m a oke ụzọ na m nwere olileanya na ị na-edegara anyị n'ihi anyị all.One ụbọchị m wanna-adị nnọọ ka ị na-,(M maara na m-ada ka a 6year ochie)ka M na-ama Switched m RAP na Poetry Kraịst kpatara bụ ihe m na-ebi ugbu a,ekele tracks ka Lezienụ mmụọ na Hip HOP.stay agọzi
Dawg na Nọgidenụ Faith 116!
Deondre • October 24, 2013 na 4:41 pm • zaghachi
M Na mkpa na-ahapụ a comment dị egwu i kwere na ị na me a nghọta doro anya na listener.May CHINEKE nọgide na-agọzi gị n'ihe niile n'ógbè gị ndụ Na Jesus Name…
Maurice • October 24, 2013 na 4:51 pm • zaghachi
Nke ahụ bụ a ezigbo obi opener. M na-ekele Chineke maka okwu na ị na-akọrọ.
Geordan • October 24, 2013 na 5:09 pm • zaghachi
Mgbe o kwuru okwu banyere “Cheesey Christian Music” M gbawara elu, akpa ọchị. Daalụ , njem.
Cole Christian • October 24, 2013 na 5:11 pm • zaghachi
Nke a bụ onye ahụ dị egwu post! Daalụ maka okwu na n'ike mmụọ nsọ, njem! Ha adịghị aga emetụbeghị.
Jessie • October 24, 2013 na 5:17 pm • zaghachi
Nke ọma kwuru. Daalụ, Ruach HaKodesh, n'ihi okwu na EZIOKWU site na nke a njikere arịa. Rụrụ ọrụ..
BrookeMeghan • October 24, 2013 na 5:24 pm • zaghachi
Amen! Daalụ maka nkekọrịta na maka agbamume.
“Ịdị ndụ bụ Kraịst, na-anwụ anwụ bụ uru.” Ndị Filipaị 1:21 – Jehova, anyị pụrụ n'ezie ibi ndụ nke a ná ndụ anyị! Ekele dịrị Gị maka nnwere onwe anyị nwere na Ị.
Jeremiah • October 24, 2013 na 5:25 pm • zaghachi
-Agụ nke a dị nnọọ ka m na-anụ
ozizi , Ọ mara oke mma ,, otuto !!!!!
Caleb • October 24, 2013 na 5:49 pm • zaghachi
Good stof Mr. Lee.
sonyeere a • October 24, 2013 na 7:04 pm • zaghachi
Enye ihe ọmụma persepective na nzube nke ọṅụ na obi ụtọ ná ndụ anyị. Ụtọ otú ị webatara na see okwu si C.S. Lewis na-ezo aka na nwa na-egwuri egwu mudpies. Anyị pụrụ ịnụ ụtọ ndụ n'ụzọ kwekọrọ nnọọ ka Kraịst!
MasiyaChoice • October 24, 2013 na 11:16 pm • zaghachi
Ee n'ezie ịnwụ bụ iji nweta. Kraịst nwụrụ ka anyị wee na-ebi ndụ na anyị kwesịrị ibi Ya. Dị ka na-eto eto ka na-anwụ na ụwa ụtọ na-adị ndụ n'eluigwe akụ.
STEPH • October 25, 2013 na 12:38 Abụ • zaghachi
M na-ekele blog Njem Lee. M jisiri a a ọtụtụ mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọbụna mgbe ụfọdụ ugbu a mgbe na mahadum…naanị agbalị ịghọta otú na-enwe ihe na n'ụzọ na-agba akaebe na Jizọs bụ ihe niile ma na ihe na-anya dị ka dịrị ndụ na. Daalụ ọzọ.
MotsiriLebea • October 25, 2013 na 5:34 Abụ • zaghachi
Chaị. M ogbi. ka n'ezie ? M pụtara na m chere na m nwetara ịgbanwe myslef tupu m na-Kraịst ma bụ ihe ọjọọ.
Yuri • October 25, 2013 na 9:19 pm • zaghachi
Awesome stof! M na-enye a uka ozi teenaged nwoke nke a izu ụka na ihe ọ pụtara ịbụ Chineke rụọ. Ndị a nwere oké ihe na m ga-abụ na ọtụtụ cover na ha oke.
Kiara • October 26, 2013 na 7:04 pm • zaghachi
Nke a post bụ ezi ngọzi.
Chase • October 28, 2013 na 3:52 pm • zaghachi
Great ozi, njem. Nọgidenụ na-na-a ìhè na a gbara ọchịchịrị n'ụwa ebe ọtụtụ ndị celebs & media-agbalị na-Kraịst n'ime ihe niile kwere omume. Good ndị mmadụ, azọpụta site ọbara-Ya, ga-emeri na ọgwụgwụ!
Shauneil • October 28, 2013 na 5:16 pm • zaghachi
harbeegail • October 28, 2013 na 5:19 pm • zaghachi
M ga-asị… Nke a bụ a ozi sitere n'aka Chineke. M talkd banyere nke a ụnyaahụ Amidst ibe m na-eto eto na ha hụrụ m ka onye a jụrụ ajụ. M na-eche iru ala na strenghtened na nke a ugbu a. Ọ dịghị-aga azụ… Jesus mgbe. More nke Chineke amara dị egwu.
Ricky Jordan • October 29, 2013 na 2:26 Abụ • zaghachi
Nke a bụ nnọọ ngọzi Njem. Nọgidenụ na-arụ ọrụ maka alaeze.
Uche • October 29, 2013 na 3:16 Abụ • zaghachi
Otu okwu 'ha ha!!!’
Inan • October 29, 2013 na 8:43 pm • zaghachi
Daalụ Bro. M mkpa n'ezie a. Dị ka a na-eto eto Christian iri na ụma, M na-na-nwetara na-ezighị ezi nkọwa nke ihe obi ụtọ na fun bụ. Ma mgbe na-agụ nke a, M na-eche dị ka m na-aghọta a obere mma. M kpọrọ ihe n'ezie a. Daalụ ọzọ, Chineke na-agọzi gị na ndị ezinụlọ. Hụrụ gị n'anya na Jizọs…
naa • October 29, 2013 na 11:16 pm • zaghachi
N'oké mkpali n'ihi na ihe ị na-eme na nke a website na mpaghara gị ụka…M na-akasị enwe obi ụtọ maka ịhụ ị azụ ke studio…M juiced maka ihe ị na-abịa
Lewis ga unelle • October 30, 2013 na 8:11 Abụ • zaghachi
Nke a bụ a ọmarịcha ozi, ya jeere ya ozi m na-ekele gị nke ukwuu maka ikwu banyere akụkụ Akwụkwọ Nsọ amaokwu Phillipians 1:21. M na a na-agbalị ọtụtụ ugboro iji ghọta ya site n'ige ntị okwuchukwu. M ekpe ekpere ka Chineke na-aga n'ihu iji ị aka na-ewu-na-eze. Chineke na-agọzi gị Bro.. Peace & n'anya ♡
DavidMoyo • November 1, 2013 na 8:01 Abụ • zaghachi
Nke a bụ egwu William, n'ezie na-ekele gị transperancy na gị humily na-ekwe ka onwe gị ga-eji nke Jehova. Chukwu gozie gị
Marjorie • November 1, 2013 na 7:22 pm • zaghachi
Nke a na ọtụtụ ndị ọzọ ozi na nke a blog na-nri na oge & na mgbe! Tonu Jehova! Daalụ maka na-eme nke a blog, M na mgbe niile ka gbara ume na Jehova, site gị posts. Biko nọgidenụ na-ekwu okwu na ide! Ka Chineke gọzie gị na ezinụlọ gị!
Jennifer • November 15, 2013 na 7:29 pm • zaghachi
Chaị! Nke a ozi n'ezie gwara m okwu! Ekele gị nke ukwuu maka ihe ị na-eme Chineke na N'ịbụ unashamed nke Gospel. Ọzọkwa, n'ihi ikwe ka Chineke na-achịkwa nke ndụ gị. Ka Chineke nọgide na-agọzi gị na ịtụnanya ezinụlọ!
Ị na-ndị dị otú ahụ a nnukwu ngọzi m ndụ!
Endy • January 19, 2014 na 5:27 pm • zaghachi
Chaị!! Up ruo mgbe oge, M tho't a dị na-emeghe,interestin,ezi uche Kraịst e jst akụkọ ifo dị ka m na-agụ site na #Francinerivers akwụkwọ. M na-akọ okwu ekwu ihe ọ bụla. Nke a mpempe n'ezie metụrụ ihe na m na ugbu a m njikere 100% ibi ndụ maka God..thanks TL..God enyere gị aka ịnọgide na-a ngọzi. #Amen!
Michael • January 29, 2014 na 1:35 pm • zaghachi
Great post, i n'ezie mmasị atụ.
Ọ bụrụ na anyị na-zoputagoro n'ezie, na Chineke kere anyị a ọhụrụ n'obi dị ọcha, o nyere n'iwu ga-greivous. (1john)
Unu ga-esi m na-ezighị ezi, ka dị anyị mkpa ozizi, ma ọ bụrụ na anyị na-azọpụta e nwere ihe anyị na-agaghị achọ ime. Ọnwụnwa ga-ka na-abịa ịrụ ụka adịghị, ma Chineke ga-ekwe ka anyị na-nwara n'elu ihe anyị pụrụ ịnagide. Ọ ga-ike ụzọ mgbapụ.
Josh • February 17, 2014 na 2:48 pm • zaghachi
Ịkwada a bụ ihe ịtụnanya! Daalụ nke ukwuu! M gị n'anya okwuchukwu, ha na-eme m ghọtara n'ezie na anyị na-enwe ezi Chineke. Daalụ Bro! Na-arụ ọrụ ọma elu.
na na na 17 afọ, na m dị nnọọ mara Chineke ịtụnanya ga-eme n'ọdịnihu tọrọ ala m.
M na-chọrọ tụọ gị ozizi ahụ e dere. I chefuru a akwụkwọ ozi akpa ọchị “OF” i dere “f” akpa ọchị Dị nnọọ jidere m anya na nke ahụ bụ niile. Ọ bụ ebe
“… Na f N'ezie ị pụrụ ịnụ ụtọ egwu n'ihe. Ma chee echiche otú ha si gbasa ihe bụ nzube nke ndụ nile: Christ. Ihe niile na-kacha mma ụtọ mgbe ọ na-rubere Christ.”
M ga-ahụ n'anya na-anụ ihe! Daalụ Bro!
Galactic • October 19, 2014 na 12:13 Abụ • zaghachi
Hi, ihe niile na-aga omume ọma ebe a na Ofcourse onye ọ bụla na-ekere òkè ozi, na nke ahụ bụ ezi mma, na-ede ihe.
Justin • October 29, 2014 na 9:57 pm • zaghachi
Chaị na ị bụ onye na-eju onye edemede na onye nkụzi! The n'ụzọ i ikwusa ozioma bụ otú ihe ọmụma. M nwere ike na-ege ntị ma na-agụ gị okwuchukwu ụbọchị nile! Ha bụ ezi nri maka mkpụrụ obi. Chineke na-agọzi gị na ezinụlọ gị!
Olobz • December 1, 2014 na 5:56 pm • zaghachi
Good ezi mma ka otu onye.
Your a ọma nlereanya na n'ike mmụọ nsọ. M na-atụ na anyị niile na-ahụ n'Eluigwe, mgbe na nanị mgbe ahụ ka anyị nwere ike na-abụ abụ 'Sweet Victory’ na ya si na njuputa. N'ihi na ugbu a Chineke na-agọzi
Keaton • February 22, 2015 na 12:28 Abụ • zaghachi
Bro, M na-enwe mmasị gị ihe dị ka a na-ekwusa karịa a musician na ị na-ọkacha mmasị m rapper. M ga-n'anya n'ezie na ohere ịgwa na a na-eje ozi na-eje ozi ndabere. M n'anya n'ezie obi gị Ya. Ọ bụrụ na m nwere ike, Echeghị m na ị ga-enye elu music 100%. M kwere ya a n'elu ikpo okwu Chineke nyere unu ka unu edify ndị nsọ na-agbasa ozi ọma mmehie. M ekpe ekpere na ị na-enwe ike kwe ahuhu na m maara nke ọma na-azụ ndị Chineke na gị ịtụnanya musical onyinye. Chineke na-agọzi gị nwanna ha hụrụ n'anya!
tamsyn • December 28, 2015 na 2:45 pm • zaghachi
Mkpụrụ obi bụ otú ahụ dị mkpa ka Chineke! Na ha ha mgbe m na-ele posts nke mere ọtụtụ m na egwu na-arụ ọrụ Chineke na-eme site na ị. ya ịtụnanya. Nọgidenụ na-edebe na. Gọzie ọ bụla mkpụrụ na mmiri Gods mee ka ị na-achụsakwa Ya mara mma Earth. Ka Ọ na-eto eto na obi ebere niile osisi.